Ezigbo enyi na onye ndụmọdụ dere ajụjụ m ga-achọ iji azịza m maka post a. Ajụjụ ya dị ntakịrị ilekwasị anya na otu ụlọ ọrụ (Email), yabụ edepụtara m azịza niile nke API niile. Ọ jụrụ ajụjụ ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ịjụ onye na-ere ha banyere API ha tupu ha ahọrọ.
API bụ ihe dị mkpa na akpaaka, ọkachasị na ngwa ngwa ahịa. Otu n’ime ihe ịma aka mgbe ị na-azụrụ nnukwu onye na-ere ihe nwere ihe zuru ezu API bụ na mmepe akụrụngwa na mmefu na-abụkarị ihe mgbe echiche. Otu ahia ma ọ bụ CMO nwere ike ịbido ịzụta ngwa ma oge ụfọdụ ndị mmepe anaghị enweta ọtụtụ ntinye.
Inyocha ike ngwakọta nke ikpo okwu site na API chọrọ karịa ajụjụ dị mfe, Enwere API?
Njirimara Gap - Chọpụta ihe njirimara nke Ntuziaka Ndị Ọrụ ha dị site na Usoro Nhazi Ngwa. Kedu ihe njirimara nke API nwere na UI enweghị ya na nke ọzọ?
Community - Jụọ ma ha nwere obodo Mmepụta dị n'ịntanetị dị maka ịkekọrịta koodu na echiche yana ndị mmepe ndị ọzọ. Obodo Mmepụta bụ isi ihe na-eme ka ịmalite mmepe gị na mbọ mwekota ngwa ngwa na nke ọma. Kama ịbinye 'onye API' ụlọ ọrụ ahụ, ị ​​na-enye ndị ahịa ha niile nsogbu, ndị nwetagoro ọnwụnwa na njehie ijikọ azịza ha.
IZU vs NT. - Jụọ ụdị API ha nwere… Otutu enwere REST APIs na Web Services (SOAP) APIs. Ha nwere ike na-emepe emepe ma. Ijikọta na nke ọ bụla nwere elele na nkọcha… ị kwesịrị ịmara nke ọma ikike nke ike mwekota '(IT) gị.
Isi okwu n’ajụjụ ndị a bụ na njikọta ‘lụrụ’ gị n’elu ikpo okwu. Chọghị ịlụ onye na-amataghị ihe niile ị nwere ike ime gbasara ha, ị chọghị? Nke a bụ naanị ihe na - eme mgbe ndị folks zụrụ ikpo okwu na - enweghị ihe ọmụma banyere ike ha nwere.